Wararka Maanta: Axad, Mar 3 , 2013-Ra’iisul Wasaaraha Somalia oo khudbad uu ka warbixiyay wixii Xukuumadda u qabsoomay ka jeediyay Baarlamaaaka (SAWIRRO)
Kulanka oo ay soo xaadireen 151 xidhibaan ayaa waxaa shir-guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Prof. Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari), iyadoo ra’iisul wasaaruhu uu khudbadiisa kaga hadlay arrimo dhowr ah oo uu ka mid ahaa dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab.
Mudane Cabdi Faarax Shirdoon oo khubad dhinacyo badan taabaneyso ka jeediyay kulanka baarlamanka ayaa ku soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay 100-kii maalmood ee ay shaqeynaysay, isagoo xusay in hormar ballaaran ay ka gaartay arrimaha dhaqaalaha dalka iyo daryeelka bulshada.
“Xukuumaddu waxay dadaal weyn u gashay sidii Somalia looga cafin lahaa daymo fara badan oo calaamka looga leeyahay, 100-ka maalmood ee soo socota waxaa la arki doonaa iyadoo la mid noqota dalalka daymaha qaata ee caalamka,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kale, wuxuu ka hadlay in adeegyada bulshada ay horumar ka gaareen sida caafimaadka iyo waxbarashada, isagoo xusay in xukuumaddu ay wax weyn ka qabtay caafimaadka dalka, ayna dhameystirtay qorshayaasha caafimaad ee dalka afarta sano ee soo socda.
“Xukuumaddu waxay furtay dugsi lagu tababaro shaqaalaha caafimaadka ee dowladda. Waxayna waddaa nidaam lagu baarayo caafimaadka cunnada iyo dawada dalka soo gala, si ay u dhamaato in dalka lasoo geliyo dawooyin iyo raashin dhacay,” ayuu yiri Saacid.
Ra’iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in waxbarashada dalka ay qorshayaal u dejiyeen, kuaasoo ay ka mid yihiii in hal milyan oo caruur Soomaaliyeed ah ay helaan waxbarasho, dibna loo furo iskuuladii ay dowladdu maamuli jirtay.
Khudbadiisa ayuu sidoo kale kusoo qaaday sharciyadii ay golaha wasiirradu ansixiyeen intii ay xukuumaddu jirtay ayaa wuxuu sheegay inay ansixiyeen, sharciga maaliyadda, kan garsoorka, xeerka guddiga xuquuqul insaanka, hidisaha sharciyada maamullada gobollada iyo degmooyinka dalka, sharicga bankiga horumarinta Soomaaliya iyo canshuuraha iyo kuwo kale, isagoo xusay inay sharciyo kale oo ay ka mid yihiin midka isgaarsiinta iyo saxaafadda ay gacanta ku hayaan, ayna u soo gudbin doonaan baarlamaanka markii ay go’aan ka garaaan.
Maamulka Puntland oo uu ka hadlay ayuu sheegay in xukuumaddu ay si aad ah u soo dhaweynayso horumarka ay ku tallaabsadeen, isagoo xusay inay u diyaarsan yihiin inay gacan ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan Al-shabaab oo uu sheegay inay doonayso inay ammaanka Puntland wax u dhinto.
Dhanka kale, maamul u sameynta Jubbaland oo uu ka hadlay ayuu sheegay in waxay jeceshahay yihiin Jubbaland aysan isaga ku xirnayn, balse ay tahay in la ixtiraamo dastuurka dalka oo cid walba ka sarreeya, isagoo sheegay in dastuurku uu ogol yahay in dalkan lagu maamulo hab federal ah, ayna arki doonaan dadka jecel in maamul Jubbaland ah la sameeyo maamulka ay jecel yihiin.
Ugu dambeyn, wuxuu ka hadlay wadahadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland isagoo sheegay inuu ugu hambalyeynayo Somaliland horumarka ay gaartay, xiriirka iyo wadahadallada u dhexeeya ayuu sheegay in marnaba aysan noqon doonin, xasarad fara isku tag-taag ah, dagaal iyo dil, waxaanan aaaminsanahay siina xoojin doonnaa wadahadal si nabadgalyo ah, iskaashi iyo walaalnimo ah oo ay ku jirto danta Soomaaliya. Wax intaas dhaafsanna uma soconno cidna tuhun yuusan ka gelin, horumarka ay gaareenna waan ugu hambalyeynaynaa.